बाक्लो हुस्सुका कारण भैरहवा, सिमरा र विराटनगरमा हुन सकेन हवाई उडान
२७ पुस, काठमाडौं । बाक्लो हुस्सुका कारण आज सोमबार तराईका तीन वटा विमानस्थलमा उडान हुन सकेन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार सोमबार भैरहवा, सिमरा र विराटनगरमा एउटा पनि उडान सम्भव भएन् । यी विमानस्थलमा उडान हुन नसक्दा आन्तरिक टर्मिनलमा अधिक भिडभाड भएको थियो । बुद्ध एयरको मात्र यी तीन वटा विमानस्थलका लागि आज निर्धारित […]
लाइपजिगमाथि डर्टमण्डको शानदार जित, बायर्नलाई फाइदा
२६ पुस, काठमाडौं । एर्लिङ ब्राउट हालान्डले चोटबाट पुनरागमन गर्दै दुई गोल गरेपछि बोरुसिया डर्टमन्डले जर्मन बुन्डेसलिगामा दोस्रो स्थानको आरबी लाइपजिगलाई ३-१ ले पराजित गरेको छ । लाइपजिग पराजित हुँदा यसको फायदा लिग लिडर बायर्न म्युनिखलाई पुगेको छ । यस्तै तेस्रो स्थानको बायर लेभरकुजन वेडर ब्रेमेनसँग बराबरीमा रोकिँदा बायर्नलाई अर्को पनि फाइदा पुगेको छ । […]
दुई गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा लिग लिडर बायर्न म्युनिख पराजित
हट्दैछ नगद बोक्नै पर्ने बाध्यता
२४ पुस, काठमाडौ । केहि दिन अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एउटा सार्वजनिक कायृक्रममा उद्घोष गरे, ‘चाडै तरकारी किन्न नगद बोक्नै पर्ने बाध्यता हट्नेछ ।’ गभर्नर अधिकारीले गरेको उद्घोषको दुइ साता पनि नवित्दै मुलुककै ठूलो फलफूल तथा तथा तरकारी बजार कालिमाटीमा ‘क्यूआर पेमेन्ट’ को शुरुवात भयो । गभर्नर अधिकारीले आफैले तरकारी किनेर उद्घाटन […]
मर्मत गर्दा भएको गल्ती लुकाउन अन्डरग्राउन्ड लाइनलाई दोष !
२४ पुस, काठमाडौं । भूमिगत गरिएको विद्युत लाइन खतरनाक हुने बतउँदै ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गत आइतबार एउटा दृष्टान्त दिँदै भनेका थिए,’कति साथीहरु मर्ने हुन्, अहिले कुलमानजीहरुले अन्डरग्राउन्ड बिजुली बनाउँदैछन् । अस्ति महाराजगञ्जमा अन्डरग्राउन्डको सट भयो । अहिले बन्द गराएर माथिबाट ल्याइयो । अहिले तलको बन्द गरियो । झन् खतरा भो । अब यस्तो गर्दिया छ […]
आफ्नै बाचा पूरा गर्न ट्रम्पलाई बाइडनको आग्रह
२३ पुस, काठमाडौं । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडनले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई यसअघि आफैंले गरेको बाचा पूरा गर्न र संविधानको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार अमेरिकाको राजधानी वासिङटनस्थित क्यापिटोल हिलमा ट्रम्पको उक्साहटमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि बाइडनले यस्तो बताएका हुन् । बाइडनले तत्काल क्यापिटोल हिललाई कब्जामुक्त गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले […]
२३ पुस, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई फेसबुक र ट्वीटरले प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अमेरिकाको वासिङटनस्थित क्यापिटोल हिलमा भएको हिंसात्मक घटनाको विषयमा गरेको पोस्टको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरुले अस्थायीरुपमा ट्रम्पमाथि प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरुलाई घर फर्किन निर्देशन दिनुभन्दा पहिला ‘आई लभ यू’ भन्ने सन्देश पठाएका थिए । ट्रम्पले बारम्बार निर्वाचनमा […]
मानिसको राजमार्ग, वन्यजन्तुको मृत्युमार्ग !
२० पुस, काठमाडौं । शुक्रबार र शनिबार पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा बाघ र मान्छेबीच भएको जम्काभेटमा दुःखद घटना भए । बारा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ आधाभार जंगलमा शनिबार विहान कारसँग ठोक्किएर १० वर्षको पोथी बाघ मर्यो । शुक्रबार बेलुका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको अम्रेनी-चिसापानी खण्डमा गुडिरहेको मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी महिलालाई बाघले तानेर लग्यो । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-४ कौवापुरकी […]
१८ पुस, काठमाडौं । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ आधारभार जंगल क्षेत्रमा निजी कारको ठक्करबाट एउटा पाटे बाघको मृत्यु भएको छ । हेटौंडाबाट सर्लाही जाँदै गरेको बा १६ च ८११ नम्बरको कारले बाटो क्रस गर्दै गरेको वयस्क बाघलाई आज बिहान ७ः२० मा ठक्कर दिएको थियो । कारको ठक्करबाट १० वर्षको पूर्ण वयस्क पाटे बाघको राजमार्गमै मृत्यु […]